यी ६ काम गर्नेलाई कहिल्यै मिल्दैन् लक्ष्मी माताको साथ ! – Sandesh Press
यी ६ काम गर्नेलाई कहिल्यै मिल्दैन् लक्ष्मी माताको साथ !
December 18, 2020 230
हरेक दिन भगवानको पूजा गरेर सोचेजस्तै कृपा पाउन सकिदैन्। धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार भगवानको कृपा पाउनको लागि भगवानलाई सह्य हुने काम गर्नु पर्छ।नराम्रो काम देखि भगवान पनि रुष्ट भएका हुन्छन्। त्यसकारण परिवारमा अशान्ति र गरीबि उत्पन्न हुन्छ । आज हामी तपाईलाई के काम गर्दा लक्ष्मी माता रिसाउँछिन् भन्ने बारे बताउन गइरहेका छौँ।
-धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार हाई आउनुलाई पनि नराम्रो मानिन्छ। हाई आउनु निस्क्रियताको पहिचान भएपनि हाइ गर्दा लक्ष्मीको कृपा मिल्दैन्।-स्वास्थयको लागि सहि समयमा सुत्नु राम्रो हो। तर लामो समय सुत्नु भनेको अमुल्य समय गुमाउनु हो। साथै यसबाट दरिद्रताको कारण पनि बन्न सक्छ।
-अशान्ति मनले गरेको कार्य सम्पन्न हुँदैन्। क्रोधले पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्छ। क्रोधले व्यक्तिको मन र मस्तिष्कमा अशान्ति मच्चाउँछ।-आलश्यता सफलताको बाटोर्ला बाधा पुर्याउँने ठूलो तत्व हो।सफलता चाहनेले आलश्यतालाई छोड्नुपर्छ अनि मात्र काम सफल बन्छ । र लक्ष्मी माता खुसी हुन्छिन्।
-डराएर काम गर्ने बानीको कारण नोक्सान बोहोर्नु पर्छ। डरले सफलतामा पुर्याउन सक्दैन्। आत्माविश्वसमा कमी ल्याउँछ।-नगरी नहुने काम गर्न जानी जानी बाहना बनाउनु राम्रो होइन्। यसले गर्दा समयमा नै काम पुरा हुँदैन् । यसले गर्दा धन आर्जन गर्न सकिदैन्।
यो पनि :शुक्रबार यस्ता काम गर्नाले सधैँ मिल्छ लक्ष्मी माताको कृपा….हिन्दू शास्त्रमा हरेक काम गर्दा समय बार र स्थानको विशेष महत्व हुने गर्दछ। कुन बार के काम गर्दा शुभ मिल्छ र के काम गर्दा अशुभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।शास्त्रका अनुसार शुक्रबारका दिन लक्ष्मीको पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। लक्ष्मीको पूजा गर्दा घरमा धन तथा समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।
आउनुहोस् जानौँ शुक्रबार के गर्दा शुभ फल मिल्छ:शुक्रबार राति लक्ष्मीमाताको पूजा गर्दा भगवान विष्णुको पनि पूजा गर्न आवश्यक छ । तपाईँ श्रीयन्त्र वा अष्टलक्ष्मीको तस्वीर पनि स्थापना गर्नसक्नुहुन्छ । यसपछि कपूरको आरती गर्ने र घरभरि नै कपुर जलाउनुपर्छ यसले नकारात्मकता समाप्त हुन्छ ।
यदि तपाईँ तकियाको मुनि राख्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँ अरोमा मैनबत्ती वा खुश्वुवाला मैनबत्ती पनि घरमा जलाउन सक्नुहुन्छ ।लक्ष्मी माताको कृपाले धनको कमी नहुने जनविश्वास हो । वास्तविक लक्ष्मी प्राप्तिका लागि चाहि सत्कर्म नै उत्तम माध्यम हो । भएको धनसम्पत्तिको राम्रो व्यवस्थापन, व्यवसाय वा कामप्रति लगाव, इमानदारिता, मेहेनत लगायतले समेत लक्ष्मी खुशी हुन्छिन् । जसबाट धर्न आर्जन गर्न सकिन्छ
Prevबिवाह गरेको २ बर्षमै बिधुवा बनेकी अभिनेत्री मेघनाले जन्माइन छोरा
Nextजान्नुहोस् कुन अंगमा सुन लगाउँदा कति अशुभ भुलेर पनि नलगाउनुस् देब्रे अंगमा सुन